Iindaba - "Isicwangciso seminyaka elishumi elinanye" sikaGuizhou sityala imali ezibhiliyoni ezintlanu ukusombulula ingxaki yokusela amanzi kwizigidi ezili-10.6 zamaphandle
Uthotho lwemibhobho yamandla
Umjelo wokuhambisa amanzi kunye nokuhambisa umbhobho wogutyulo
Uluhlu lwePayipi yoKwakha
Uthotho lwemibhobho yonxibelelwano
Uthotho lwemibhobho yokuhambisa amanzi
Umbhobho odibeneyo wentsimbi-yeplastiki
Uthotho lwemibhobho ekhethekileyo
Isicwangciso seminyaka elishumi elinesihlanu sikaGuizhou "sityala imali eziibhiliyoni ezintlanu ukusombulula ingxaki yokusela amanzi kwizigidi ezili-10.6 zamaphandle
Kwisiza sokwakhiwa kweProjekthi yokuhambisa amanzi ye-Anda eNtsha yoMgama oMde in kwiJinsha County, iintlobo ezahlukeneyo zoomatshini bokwakha baxakekile kwindawo yomthombo wamanzi kunye nendawo yokubeka imibhobho ukuqinisekisa ukuba eyona projekthi iphambili igqityiwe ukuphela unyaka.
Eyona projekthi inkulu yemibhobho emide yokuhambisa amanzi kwiiprojekthi zokhuseleko lwamanzi aselwayo kwiPhondo laseGuizhou, xa igqityiwe, inokusombulula ingxaki yokhuseleko lwamanzi okusela yabantu abangama-69,900 kwilokishi yase-Anluo, kwilokishi yase-Datian, nase-Xinhua Idolophu yase-Jinsha County.
I-Comrades ezivela kwiSebe laBantu abaselayo kwiSebe leziBonelelo zaManzi bathi zingaphezulu kwe-100 iiprojekthi zabantu zokusela ezakhiwayo ngolu hlobo.
Ngexesha lesicwangciso “Seshumi elinanye seminyaka emihlanu”, nangona yayizizigidi ezi-6.15 kuphela zabantu ezazicwangciselwe “isiCwangciso sokuQeda ukuNxanxathela”, phofu, bekukho izigidi ezili-10.6 zabantu basemaphandleni abanamanzi okusela amdaka kwiphondo, besithi ndlela-ntle emanzini okusela ngenxa ukumiliselwa kweeprojekthi zokusela zabantu.
Ukusukela ngo-1996 ukuya ku-2004, iPhondo laseGuizhou laphumeza izigaba ezibini ze “Project Desire” kunye ne “Poverness Relief Project”, ezanceda abantu abangaphezulu kwezigidi ezili-18 basemaphandleni kwiPhondo laseGuizhou ukuba “banxanwe”, kodwa uphando novavanyo ngo-2005 lwabonisa ukuba izigidi ezingama-23 abantu basemaphandleni kwiPhondo laseGuizhou Abemi bathwaxwa ngamanzi okusela angakhuselekanga.
Ukusukela ngo-2006, ulwakhiwo lobunjineli kukhuseleko lwamanzi okusela emaphandleni eGuizhou luqalisile. Utyalo-mali “lwamanqanaba amathathu ngokudibeneyo” luseke ikhonkco lenkxaso mali eliqinileyo, elenza "isiCwangciso seMinyaka emiHlanu se-11" lelona xesha likhula ngokukhawuleza nelona lifanelekileyo lomsebenzi wokhuseleko lwamanzi okusela emaphandleni kwiPhondo laseGuizhou.
Kulindeleke ukuba uphele lo nyaka, iphondo lityale imali iyonke engama-4.944 bhiliyoni yuan kwiiprojekthi zamanzi okusela ezilalini. Phakathi kwabo, urhulumente ophakathi utyale imali eyi-3.012 yezigidigidi ze-yuan, kwaye amalungiselelo ezemali kwinqanaba lephondo le-1.546 yezigidigidi ze-yuan axhamle kutyalo-mali lwamafama aqokelelweyo kunye nenkunzi yezaphulelo zomsebenzi ezingaphezulu kwezigidi ezingama-300 ze-yuan.
Okwangoku, iPhondo laseGuizhou liqhuba "isiCwangciso seShumi elinesibini seminyaka emihlanu" sokucwangciswa kokhuseleko lwamanzi aselwayo kwiphondo, ethe yawuphumeza yawenza umsebenzi wokhuseleko lwamanzi okusela abantu abayi-2 ukuya kwezi-3 ezigidi zabantu basemaphandleni kwiphondo ukusukela ngo-2008 ukuya 2012 ngonyaka, kwaye uyenze unyaka omnye kwangaphambili Uyilo lweprojekthi nganye kunye nesicwangciso sokuphunyezwa ngokubanzi.
Ixesha Post: Meyi-21-2020
Indawo yoTyalo-mali yaseFuhong Yuanhong, kwiPhondo laseFujian
Umgama wokuqala wase China “one-ho ...
"Ishumi elinanye leminyaka emihlanu P ...
Kushishino kumbhobho zeplastiki entsha ha ...
Siyavuyisana ngokufudumeleyo kuFujian Shengyang ...